Ugudbinta Daryeelka - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Adeegyada Caafimaadka Xubinta > Kala-guurka Daryeelka
Baro sida CHPW u wajaho sii wadida iyo kala guurka daryeelka.
Waqti ka waqti, dheefaha isqorista waxaa laga wareejin karaa hal qorshe ama bixiyaha daryeelka aasaasiga ah mid kale, ama wuxuu dhacayaa inta lagu guda jiro koorsada daaweynta iyada oo loo marayo joojinta qandaraaska, ka saarista diiwaanka, ama daalista faa'iidooyinka jira.
Waqtiyada sida kuwan oo kale ah, Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) wuxuu dhiirrigeliyaa sii socoshada iyo habsami-u-socodka iyo kala-guurka daryeelka caafimaad ee daruuriga ah iyo is-dhexgalka adeegyada. Qaabkan majiraan wax carqaladeyn ah oo kuxiran qofka isqoraya ama daryeelkiisa. Waxaan ku dadaalnaa inaan ilaalino xiriirka ka dhexeeya isqorayaasha iyo bixiyeyaasha inta howshan socoto.
Ugudbinta CHPW ee daryeelka iyo ilaha
CHPW waa Maaraynta Caafimaadka shaqaaluhu waxay si toos ah ula shaqeeyaan isqorayaasha (ama waxay fududeeyaan dadaalada iskuduwid ee bixiyeyaasha) si looga caawiyo sii wadida iyo u gudbida daryeelka kale markii loo baahdo. Xubnaha shaqaalaheennu waxay la xiriiraan hay'adaha bulshada ama waxay u diraan caawimaadda dadweynaha hadba sida ugu habboon uguna oggolaanshaha diiwaangeliyaha.
Waxaan sidoo kale diyaar u nahay inaan ka caawinno bixiyeyaasha sidii ay isugu dubbaridi lahaayeen adeegyada iyo barnaamijyada ku habboon ee laga heli karo dadka iska diiwaangeliya. Kheyraadkaas waxaa ka mid ah:
Talaabooyinka Koowaad Adeegyada Taakulaynta Hooyada / Maareynta Kiiska Dhallaanka
Adeegyada gaadiidka iyo turjubaanka
Barnaamijka Dib u Eegista Bukaanka iyo Isuduwaha (PRC), ee isqoristayaasha buuxiya shuruudaha lagu cadeeyay WAC 182-501-0135
Daryeelka korinta / Kordhinta Fayoobaanta
Ururada Adeegga Maamulka ee Caafimaadka Habdhaqanka (BH-ASO) ee loogu talagalay adeegyada caafimaadka maskaxda
Adeegyada khalkhalka isticmaalka maandooriyaha
Taageerada Hore ee Dhallaanka iyo Socodbaradka (ESIT)
Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Maamulka Caafimaadka Maxalliga ah, oo ay ku jiraan adeegyada Cinwaanka V ee carruurta leh baahiyaha daryeelka caafimaadka gaarka ah